ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ခေတ်မီစံပြကျေးရွာ (SMART Village) များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ
အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့် အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Prak Sokhonn ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန(၁) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ...
အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် နေပြည်တော်မှထွက်ခွာ
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးနှင့် အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာပရပ်ဆုတ်ခွန်းသည် ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်မှ...
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံအတွင်း ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေသော COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာချာလီသန်း ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခု ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြသည့် ဝန်ထမ်းသား/သမီးများကို ဂုဏ်ပြုပွဲတက်ရောက်
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာချာလီသန်းသည် ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခု ပညာသင်နှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင်...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဌေးအောင် ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာဖြင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များ ပိုမိုလာရောက်ရေးနှင့် လိုအပ်သည်များ ကူညီဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဌေးအောင်သည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဝန်ကြီးဌာန၊ နီလာခန်းမ၌ကျင်းပသော လုပ်ငန်းဗီဇာနှင့် ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာတို့ဖြင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များ...
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပွဲကျင်းပ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်တွင် ရုံးအမှတ်(၁)ရှိ သတ်မှတ်နေရာ၌ ကျင်းပသည်။
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ...
MCRD co-op mart အရောင်းဆိုင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ဇူလိုင်(၂)ရက်တွင် ကျရောက်မည့် နှစ်(၁၀၀)ပြည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သမဝါယမနေ့ကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် MCRD Co-op Mart အရောင်းဆိုင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် သမဝါယမလုပ်ငန်းများရှင်သန်ရေး...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမြင့်ကြိုင် လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်းကိန်းများ အသုံးပြုသူများ၏ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်းကိန်းများ အသုံးပြုသူများ၏ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင်နေပြည်တော်ရှိ ဝန်ကြီးဌာနစုဝေးခန်းမ၌ ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည်။
Ministry of Cooperatives and Rural Development/ Nay Pyi Taw / May 26, 2022
နေပြည်တော် မေ ၂၅
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမြင့်စိုးသည် ယနေ့မွန်းလွဲ ပိုင်းက ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ခေတ်မီစံပြကျေးရွာ (SMART Village) များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ သမဝါယမလုပ်ငန်းများ၊ ရက်ကန်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုများအား သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဒေါ်မြင့်ဝင်းကြည်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးစိုးသန်း၊ အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဇင်လတ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမြင့်စိုးနှင့်အဖွဲ့သည် ကရင်ပြည်နယ်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရုံးသို့ ရောက်ရှိပြီး ဦးစီးဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံကာ ဒုတိယ ဝန်ကြီးက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ ဥပဒေများအား လေးစားလိုက်နာကာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြရန်၊ ဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒများ၊ ရည်မှန်းချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်စေရေး ဝန်ထမ်းအားလုံးက ပူးပေါင်းပါဝင်၍ တက်ကြွစွာဆောင်ရွက် ကြရန်နှင့် ဦးစီးဌာနများအချင်းချင်း ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ကြရန် မှာကြားပြီး ကရင်ပြည်နယ်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းခန်းမ၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအထောက်အကူပြု မော်တာအပ်ချုပ်စက်သင်တန်းအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများအပေါ် ဖြည့်စွက်မှာကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် အဖွဲ့သည် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၊ ထီလုံကျေးရွာရှိ သမ္ဘာန်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အထွေထွေစီးပွားရေး သမဝါယမအသင်းသို့ ရောက်ရှိကာ Contract Farming စနစ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသော အသင်းသားတောင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေ အနေများအပေါ် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည် ဘားအံမြို့၊ ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းသို့ ရောက်ရှိပြီး အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဇင်လတ်နှင့် ရက်ကန်းသင်တန်းကျောင်းအုပ်ကြီးတို့မှ သင်တန်းကျောင်း၏ အခြေအနေ၊ သင်တန်းပို့ချနေမှုများနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် သင်တန်းများ၏အခြေအနေ တင်ပြမှု များအပေါ် ဒုတိယဝန်ကြီးက လိုအပ်သည်များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးပြီး သင်တန်းသားများ၏ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေသည့် ရက်ကန်းလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝဆိုးဆေးနည်းပညာသင်တန်း ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်နေမှုများအား ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည် ဘားအံမြို့နယ်၊ ထုံးအိုင်ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိပြီး ဒေသခံပြည်သူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးမှ ဘားအံမြို့နယ် အိမ်ခြေ (၁၈၆၃) အိမ်၊ လူဦး ရေ (၁၀၃၃၀) ရှိ ထုံးအိုင်ကျေးရွာအား ခေတ်မီစံပြကျေးရွာ (SMART Village) အဖြစ် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ တင်ပြမှုအပေါ် ဒုတိယဝန်ကြီးက မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးတို့တွင် ခေတ်မီစံပြကျေးရွာ (SMART Village) များ ထူထောင်ပေးနေပါကြောင်း၊ ယခုအခါ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း အခြေခံမူ (၁၅) ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော ကျေးရွာ (၃) ရွာအား ရွေးချယ်ပြီး ဦးစီးဌာနများအချင်းချင်း ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ခေတ်မီစံပြကျေးရွာ (SMART Village) များကို ကျေးရွာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးစေပြီး ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မား လာစေခြင်း၊ သွင်းအားစု၊ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် နည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ကျေးလက် စီးပွားရေး မြင့်မားလာစေခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော နေချင့်စဖွယ် စံပြကျေးရွာများ ဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းနှင့် ကျေးရွာသူ/ သားများနှင့် ကျေးရွာအသင်းအဖွဲ့များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ရရှိစေခြင်းစသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါကြောင်း၊ ဒေသခံများမှလည်း မိမိတို့ရပ်ရွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် တက်ကြွစွာဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြစေလိုပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များရှိပါကလည်း တင်ပြပေးစေလိုပါကြောင်း ပြောကြားပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ လုပ်ငန်းလိုအပ်များ တင်ပြမှုအပေါ် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Services (Offline) - 26 items
မျိုးခြံလုပ်ငန်း ၊ ဥဖောက်လုပ်ငန်း ၊ မွေးမြူရေးခြံလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ၊ PC(7) ထုတ်ပေးခြင်း
Chin State Government / October 05, 2021
စိုက်ပျိုး မွေးမြူ၊ ထုတ်လုပ်ရေး အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခွင့်။
Yangon Region Government / September 30, 2021
Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation / April 09, 2018
ပျားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် မွေးမြူမှုလိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း
Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation / April 18, 2018
ရေထွက်ပစ္စည်းများ Normal & Border Trade ဖြင့် တင်ပို့ခြင်း။
Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation / April 25, 2018
MoH Union Minister holds coordination meeting on RDT use for international flight passengers, inspects preparations at Yangon International Airport
Ministry of Information/ Naypyitaw / April 29, 2022
UNION Minister for Health Prof Dr Thet Khaing Win presided overacoordination meeting on plans to change into an RDT system for international flights on 27 April.
During the meeting, the Union minister said the infection rate of COVID-19 has declined in most regional countries, including Myanmar. Specific activities are also prioritized systematically to ease COVID-19 rules and regulations as the COVID-19 vaccine coverage becomes high.
The government also arranged to ensure the reopening of international flights and systematic COVID-19 health rules for the tourist and Myanmar citizen arrivals to develop the country’s global tourism industry.
He also talked about the declining positive cases among the passengers in commercial flights and relief flights, challenges in the resumption of commercial aviation, and the COVID19 Antigen Rapid Diagnostic Test (RDT) to save time and money for flight passengers.
Then, meeting attendees discussed proper services for passengers, plans to change into RDT (draft) and current challenges during the resumption of international flights, visas, health insurance, collection of Myanmar kyats for RDT test, preparations to avoid mass gatherings in RDT test section at the airport, taking swab samples, quality RDT test kits and other matters.
The Union minister instructed necessary things and concluded the meeting.
The Union minister and relevant officials inspected the preparations to conduct COVID-19 tests using RDT on the passengers of regular international flights at Yangon International Airport yesterday.
During the inspection tour, the Union minister instructed officials to systematically collect data from passengers, swab samples, the opening of more swab counters to avoid mass gathers while waiting for their test results, establish an exchange counter, welfare of airport staff and disease control activities when the results show positive.
The Ministry of Health allowed the international flights starting 17-4-2022 as per COVID-19 health rules under the COVID-19 Central Committee on Prevention, Control and Treatment and decided to use RDT at the Yangon International Airport soon to save the cost as the infection rate drops.
စစ်တက္ကသိုလ်၊ တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်နှင့် တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်အမျိုးသမီးဗိုလ်လောင်းများအတွက် အသက်ကန့်သတ်ချက်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း
registered users 6874
Contact us Term of use Private policy Sitemap Feedback
© 2018 Government of Republic of the Union of Myanmar.